सबै brightest कस्मेटिक रुझान परंपरागत पूर्व देखि आउनुहोस्। त्यसैले यसलाई तकिया भनिने नयाँ टोन बनाउन-अप थियो। यो उत्पादन बारे समीक्षा द्रुत फोरम भर। Byutigoliki सबै ठूलो चासो संग दुनिया भर र खुशी, नवीनता परीक्षण बिना र आफ्नो दृश्य साझेदारी गर्नुहोस्। विचार र हामी यो नयाँ सुविधा पूर्व पश्चिमी उच्चारण।
एक तकिया के हो?
मा अंग्रेजी शब्द एक तकिया "तकिया" जस्तै सुनिन्छ, र यो सुधार हालतमा को आधार छ। को tonal जग र यसको आवेदन लागि विशेष स्पन्जले समावेश संग दर्पण राउन्ड जार: तकिया एक पाउडर बक्स जस्तो देखिन्छ। को तकिया के गर्छ? र जार को तल तरल जग संग गर्भवती त्यही प्याड छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद। स्पन्जले को मद्दतले सजिलै छाला मा वितरण गर्न यो र साधन सार्न प्याड स्पर्श गर्न आवश्यक छ। धेरै आर्थिक हालतमा खर्च, छैन स्पन्जले धेरै अवशोषित र छाला संग सम्पर्क मा राम्रो उत्पादन दिन्छ।
तकिया आवरण सजिलो weightless, मइस्चराइजिंग छ र साथ छाला mattes र किनभने आफ्नो जन्म ठाउ को - दक्षिण कोरिया, यसलाई यूवी रेज देखि सुरक्षा को एक उच्च डिग्री छ।
अर्थ त चाँडै, व्यापक भयो "पैड" केही थप कस्मेटिक उत्पादनहरु उत्पादन गर्न थाले:
शरमाना। कारण स्पन्जले applicator रोगन बिस्तारै लागू गरिन्छ र सजिलै वितरण।
Glosses, balms र रंग लिपस्टिक। यो प्याड सहज बनावट लागू तरल प्रदान गर्दछ।
तरल आँखा छाया। यसलाई लागू गर्न सजिलो र तुरुन्तै छाया को सतह अर्थ माथिका छ।
Concealers। बिस्तारै आँखा वरिपरि क्षेत्रमा उत्पादन वितरण।
पहिले उल्लेख रूपमा, यो टोन जो कि यो सबै अन्य अवस्थामा, उत्पादन धेरै राम्रो काम गर्छ, बलियो rashes र स्थलहरू ब्लक गर्दैन अर्थ, उज्यालो कोटिंग हो।
तेल छाला र बढेको pores एशियाली तकिया लागि थप उपयुक्त को मालिक। कोरियाली एजेन्ट टिप्पणी तिनीहरूले Matira pores ढाकछोप र अनुहार को राहत equalize राम्रो हो भनेर पुष्टि। यो छाला को एशियाली प्रकार थप बाक्लो तेल र porous युरोप विपरीत छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। यूरोप अक्सर hydration र पोषण को आवश्यकता मा एक ड्राई पातलो छाला छ। तपाईंको छाला को प्रकार यस्तो छ भने त्यो तकिया युरोपेली निर्माताहरु तपाईं सिद्ध छन्। तिनीहरूले पानी सन्तुलन कायम, पोसिलो तेल, तरकारी सामाग्री समावेश, र राम्रो तरिकाले सूर्यका को हानिकारक प्रभाव सुरक्षित।
कुनै पनि tonal जग तकिया संग को रूप मा, तयार छाला लागू गर्नुपर्छ अनुष्ठान सफाई र मइस्चराइजिंग पछि। स्पन्जले हल्कासित हामी यसलाई सङ्कलन, को तकिया मा तल प्रेस, र हामी बाहिरी भागमा केन्द्र देखि आन्दोलनहरु patting द्वारा छाला मा उत्पादन राखे। त्यहाँ कोटिंग तह थप बाक्लो बनाउन आवश्यक छ भने, फेरि उपकरण गराउँछ। यो हुन्छ कि जो असहज कारण लागि स्पन्जले, को लागू मतलब छ, यो टोन, उदाहरणका लागि, तपाईं परिचित कुनै पनि तरिका मा वितरण गर्न सकिन्छ, जबकि एक tonal फ्रेमवर्क वा औँलामा लागि ब्रश संग।
नियम को रूप मा, तकिया तपाईंको छाला को प्रकार को लागि सही चुनिएको छ भने, यो dusting आवश्यकता छैन, तर आफ्नो छाला बोसो सामग्री खतरा छ भने, यो सिर्फ मामला लगाएका मा सम्भव टि-क्षेत्र मा पाउडर लागू छ, र मेरो पर्स मा चटाई पट्टियां।
मेकअप हटाउने एक परिचित तरिकामा बाहिर छ। कोरियाई उत्पादन जग बनाउन-अप हटाउने सर्वोत्तम गरेको छ भने एक जलरागी तेल। युरोपेली टोन गोली मार गर्न सक्छन् micellar पानी वा दूध।
अब सबैभन्दा चिरपरिचित ब्रान्डहरु ग्राहक समीक्षा विचार तकिया जारी छ, र निर्माताहरु प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
युरोपेली निर्माताहरु को पहिलो एक तकिया देखा "Lancome"। समीक्षा यस उपकरण मा पनि अरूलाई अघि देखा पर्नुभयो। चमत्कार तकिया, यो tonal आधार को अर्थात् नाम, छाला र सिद्ध अनुहारको रुप रंग को असिद्धता को राम्रो मिल्दाजुल्दा संग उज्यालो घुम्टोमा लेपित यूवी सुरक्षा को एक उच्च डिग्री (एसपीएफ 23) प्रदान गर्दछ। टोनलाई गाढा स्थलहरू र असमान कोटिंग को घटना को डर बिना, धेरै पत्रहरु मा लागू हुन सक्छ। यो peeling लुकाउन र शक्तिशाली मइस्चराइजिंग प्रभाव छ सक्छन् किनभने यो सुक्खा र सामान्य छाला को आदर्श मालिक हो।
महिला ग्राहकहरु चमत्कार तकिया राम्रो प्रतिक्रिया। विशेष गरी weightless कभरेज, सुन्दर प्राकृतिक रंग, दिन भर चिस्यान को एक अर्थमा, छाला मा stickiness को कमी जस्तै। तर यदि तेल छाला झुकाव छ, यो तेजी यसको विशेषता प्रतिभा र प्रतिरोध एकदम कम मतलब को अनुहार देखिन्छ। अर्को नकारात्मक - उच्च मूल्य,3000 पी बाट।
तकिया "Iv Roshe" यो एक धेरै पहिलो भन्दा सस्ता अर्थ मात्र किनभने यदि, राम्रो समीक्षा छ, र यो क्षमा गर्न धेरै छ। निर्माता babassu तेल बीउ मा धनी एक संरचना प्रदान गर्दछ र अन्य सामाग्री को एक किसिम छाला पोषण। यो उपकरण भिजेको अनुहार फैशन प्रभाव, हाइलाइटर को आवेदन आवश्यक गर्दैन छोड्छ। शुद्ध हल्का गुलाबी र पहेंलो poddtonom संग धेरै रंग छाला को वस्तुतः कुनै पनि प्रकारको लागि, दुर्भाग्यवश, ज्योति बाहेक छ "पोर्सिलेन।" यस्तो दुर्लभ सुन्दर छाया थप उपयुक्त वा एशियाली tonal नींव, वा अन्य युरोपेली निर्माताहरु लागि।
उत्पादन जस्तै उपभोक्ताहरु छाला मजबूत र moisturizes छैन। सुक्खा छाला को मालिक सेक्सी गीला प्रभाव मूल्यांकन, तर ती जसको छाला बोसो खतरा छ लागि, पर्याप्त छैन प्रतिरोध र ग्लोसीसमाप्त हालतमा-प्लस थप्न छैन।
किफायती मूल्य बिन्दु मा ठूलो उत्पादन को अर्को तरिका - तकिया "Loreal"। समीक्षा विरोधाभासी रूपमा यो उत्पादनको लागि। निर्माता तंग प्रतिज्ञा, तर एकै समयमा weightless कवर, पोषक संग छाला को hydration र संतृप्ति मा। यो 12 रंग को एक धनी प्यालेट हो। अब तपाईंको सिद्ध टोन पाउन धेरै सजिलो छ।
यो जग एक ठूलो फाइदा मइस्चराइजिंग र राम्रो पहिरन शक्ति छ। उपकरण धेरै पत्रहरु मा लागू गरियो र अनुहार पर्दा को रंग ताजा, लगभग कुनै पनि त्रुटिपूर्ण वा एक तह, सिर्जना ज्योति कवर कटौती गर्न सकिन्छ। यो बेफाइदा प्रतिरोध को कमी र निधारमा र नाक को क्षेत्र dusting लागि आवश्यकता हो।
हुनत छैन तकिया "Sephora" समीक्षा मात्र सकारात्मक छन् यो उपकरण, ठूलो उत्पादन ब्रान्डहरु को उत्पादन भन्दा एक उच्च मान छ। खरीदारों फेरि यो उपकरण किन्न गर्ने ती, र अब लिनेहरूलाई विभाजित थियो। यस मामला मा, मालिकहरूले tonal आधार peeling र त्रुटिपूर्ण राहत जोड गर्न सक्छन्, सुख्खा छाला संग दुखी थिए। बोसो सामग्री झुकाउ छाला, tonal आधार असिद्धता र राम्रो प्रकट नै प्रतिरोध मा लुकाउने, अधिभार छैन।
Sephora मात्र तकिया अस्तर छाला टोन, तर पनि तकिया, शरमाना र लिपस्टिक उत्पादन गर्छ। यी धन तिनीहरूले प्रयोग मा सजिलो, संकुचित प्याकेज स्वरूप र धनी "स्वादिष्ट" रंग याद गर्नुहोस्, ग्राहकहरु संग धेरै लोकप्रिय छन्।
माथि योग: त्यहाँ ध्यान टोन तकिया को योग्य छ? समीक्षा कि unequivocally देखाउन - हो! स्पष्ट लाभ मतलब:
फोक्सो, एक मास्क प्रभाव बिना प्राकृतिक कोटिंग।
को unobtrusive फैशन strobinga एउटा स्वस्थ चमक देखि छाला जोड दिंदै।
Hydration र पोषण।
यूवी प्रकाश सुरक्षा।
पङ्क्तिबद्ध अनुहार राहत।
को अनुहारको रुप रंग, छाला असिद्धता को सुधार aligning।
एक विशेष ब्रश वा सौन्दर्य ब्लेंडर किन्न कुनै आवश्यकता: उत्पादन को सहज आवेदन।
सक्नुहुन्छ सजिलै मेकअप सच्याउन झोला र कुनै पनि समयमा राख्न भनेर ऐना संग प्याकेजिङ्ग।
वर्थ प्रयास गर्नुहोस् र यो तपाईं मिल्दो वा निर्णय यी गुणहरू मार्फत यस जग।
कुनै पनि कस्मेटिक उत्पादन संग, तकिया (समीक्षा यसलाई पुष्टि), उत्तिकै सबैलाई आउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले, खरीददारों केही बेफाइदा उल्लेख छ:
अपर्याप्त प्रतिरोध। केही घण्टा पछि मेकअप सच्याउन आवश्यक छ।
उत्पादन भएको गंभीर rashes र गाढा pigmented स्थलहरू मास्क छैन।
अनावश्यक चम्कने, तेल छाला झुकाउ थप्छ।
यसलाई कडा सुक्खा, निर्जलित छाला मा peeling जोड गर्न सक्नुहुन्छ।
छैन भन्दा स्वच्छ तरिका - केही टोन को आवेदन स्पन्जले प्रयोग भन्ने विश्वास गर्छन्।
मूल्य। केही उत्पादनहरु को लागत एकदम उच्च छ।
तपाईंको छाला एक बाक्लो कोटिंग र मइस्चराइजिंग र यो अभाव शक्ति आवश्यक छैन भने, यो जग तकिया प्रयास लायक छ। एक उत्पादन एक विशेष प्रतिष्ठा, समीक्षा निश्चित सिर्जना गर्नेछ, तर भनाइ जान्छ रूपमा, राम्रो पटक हेर्न!
सबै भन्दा राम्रो जग - यो के हो?
मलम "राहत" शिकन: समीक्षाएँ beauticians र ग्राहकहरु
"Foretal" (क्रीम) हो। प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि निर्देशन
पनीर को Appetizer: प्रकार, व्यञ्जनहरु
कसरी हिप प्रतिस्थापन सर्जरी पछि व्यवहार गर्न: सामान्य निर्देशन
निजी घरमा पानी आपूर्ति को योजना। डिजाइन, उपकरण, मूल्य
को fastened मर्मतका मा गोठ आकार गाई
Gestational मधुमेह: कारणहरू, लक्षण, उपचार
देशको युद्धको आदेश, रगतले योग्य छ
, मृगौला रोग लागि विशेष आहार सुरक्षित वजन खोने